Sida loo Fedora: Ku rakib, Raadi oo ka saar barnaamijyada qaab muuqaal ah (GPK-Application iyo Apper) | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo Fedora: Ku rakib, Raadi oo ka saar codsiyada qaab muuqaal ah (GPK-Application iyo Apper)
Perseus | | GNU / Linux, Lagu taliyay, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Marar badan, isticmaaleyaasha GNU / Linux ayaa ka badan “khibrad leh"Waxaan isku dayeynaa inaan khibradeena la wadaagno dadka cusub (ama kuwa xiisaha leh) anagoo ka eegayna xoogaa qaldan, maxaan ugala jeedaa tan? Hagaag, inbadan oo naga mid ah waxay jecelyihiin inay isticmaalaan terminaalka, konsole, tty ama waxkastoo ay doorbidaan inay ugu yeeraan, maxaa yeelay waa aalad aad u faa'iido badan, dhakhso badan oo dhinacyo badan leh, laakiin uma istaageyno inaan u maleyno taas, si kama 'ah, waxaan u cabsi gelineynaa ama u abuureynaa sawir been ah ama aaminsan in GNU / Linux wax waliba ay aad u dhib badan yihiin. Tusaalaha caadiga ah wuxuu noqon karaa:
"Maxay tahay sababta aan u barto isticmaalka terminal-ka si aan ugu rakibi karo "kelinimada" kombiyuutarkayga? Nidaamyada kale ee hawlgalka, waa ku filan tahay inaad laba-gujiso guji faylka X oo aad siiso xiga, xiga ... Wax walba waan ku samayn karaa garaaf ahaan. Haddii wax walba oo ku jira "Linux" ay sidan yihiin, waxaan ku fiicnaan lahaa inaan joogo halka aan joogo".
Noocyada faallooyinka noocan ahi waa rootigeena maalinlaha ah ee baloogyada kala duwan ee la xidhiidha penguin. Ujeeddadaydu maahan inaan u istaago in aan ka doodo kan yaa saxan iyo kan aan saxnayn ama ka qaldan iyo kan aan qaldanayn. Ujeedada qoraalkani waa si sax ah in loo muujiyo: GNU / Linux sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa noocan ah waxyaabaha aasaasiga ah garaaf ahaan adigoon isticmaaleynin terminaalka. Waxay ku xirnaan doontaa isticmaalaha inuu go'aansado ikhtiyaarka uu qaadanayo iyo ikhtiyaarka u fudud ama ku habboon ee xaalad la siiyay.
Fedora waxaan ku leenahay 2 maareeyayaal xirmo oo adeegsada qaab muuqaal ah, kuwan waa: gpk-codsi loogu talagalay Gnome, XFCE iyo LXDE iyo qosol loogu talagalay KDE. Maxay u jiraan 2 nooc? Sababta fudud ee Gnome, XFCE iyo LXDE u isticmaalaan maktabadda GTK + iyo KDE waxay isticmaashaa maktabada QT (haddii qof doonayo inuu wax badan ka ogaado: GTK +, QT). Hawlgalka labada maareeyayaasha xirmooyinka ayaa aad isugu eg inkasta oo muuqaalkoodu ka duwanaan karo, ujeeddooyin la taaban karo, tan Sida loo Waxaan arki doonaa sida loo sameeyo gpk-application. Isticmaalayaasha Apper (KDE), fikradaha halkan lagu sharaxay waxay khuseeyaan maamulaha dalabkaaga;).
Maamul xirmooyinka adoo adeegsanaya gpk-application (Gnome, XFCE iyo LXDE)
Maadaama gpk-application uu yahay maareeyaha xirmada aasaasiga ah ee 3-daas deegaan desktop (oo aan la tirin maareeyayaasha daaqada ¬.¬), waxaan u arkaa wax aan macquul aheyn in la dhigo shaashadaha qaababka badan ee sida looga helo Gnome, XFCE iyo LXDE iyo kuwa kale :(, si aad u noqotid mid ficil ah waxaan u adeegsaneynaa barnaamijka furitaanka;).
Hagaag, si aan u helno maareeyahayaga dalabka waxaan riixnaa Alt + F2 oo waxaan u qornaa:
ka dib, waxaan riixnaa Enter oo sawir sida soo socda waa inuu muuqdaa:
Aan aragno sida maamuleheena arjiga u sameysan yahay:
Qeybtaan daaqadda waxaan ka raadin karnaa xirmooyinka ama dalabyadayada, kaliya ku qor sharaxaad ama magaca.
Qeybtaan daaqadeena, liiska xirmooyinka u dhigma magaca ama sharaxaada lagu qoray sanduuqa Raadinta qoraalka ayaa soo muuqan doona.
Qeybtaan daaqadeena waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan maadaama iyada oo aan ku kala shaandheyn karno xirmooyinkayaga 3 qaabab kala duwan, aan aragno xulashooyinkaaga oo faahfaahsan
Halkaan waxaan ka heli doonnaa xirmooyin xirmooyin isku xiran oo ku xiran nooca ay ka tirsan yihiin, tusaale ahaan: Buugaagta iyo hagayaasha, Naqshadeynta Naqshadeynta, iwm. Waa in la ogaadaa in haddii aan rakibno ururinta, dhammaan xirmooyinka ku jira ururintaas ayaa la rakibayaa.
Doorashadan ayaa noo oggolaaneysa inaan aragno xirmooyinka ugu dambeeyay ee lagu daray kuweenna Keydinta software-ka.
Xirmooyinka la xushay
Xulashadani waxay ina tuseysaa dhammaan baakadaha aan dooranay kahor rakibida ama hawlgalka furitaanka, tani waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh in la xaqiijiyo ka hor inta aan la dalban isbeddelada nidaamkayaga.
Qeybtaan daaqadda, waxaan ka heli doonnaa dhammaan xirmooyinka lagu kala soocay qaybo, sidaa darteed haddii aan go'aansanno inaan raadino tusaale bog furaha shabakadda, waxa kaliya ee aan sameyn lahayn waa inaan galno qaybta Internetka si ay noo tusto dhammaan xirmooyinka la xiriira iyo kuwa la heli karo qaybtaas.
Qeybtaan ugu dambeysa ee daaqada waxaan ku arki doonaa sharaxaad kooban oo ku saabsan xirmada aan dooranay, oo na tusaysa xogta sida: waxa loogu talagalay, kooxda ay ka tirsan tahay, nooca shatiga (ama GPL, BSD, gaar ah, iwm), cabirka la mid ah keydka ay leedahay. Waxaan aragnaa sida qalabkani u wada shaqeeyo tusaale;).
Aynu raadinno xirmada Firefox:
Waxaan rajeynayaa in faahfaahinta kore, aad kala saari karto dhammaan macluumaadka lagu soo bandhigay shaashadda: P. Sida aad u arki doontid xirmada Firefox waxay umuuqdaan kuwa calaamadeysan, maxay tan macnaheedu tahay? Waayahay, marka xirmo la calaamadeeyo waxay ka dhigan tahay in horay loo rakibay.
Rakib oo ka saar baakadaha ama codsiyada
Si aan u rakibno ama u tirtirno xirmooyinka ama codsiyada nidaamkayaga, waxa ugu horeeya ee aan sameynayno waa: raadinta xirmada, adoo ku raadinaya magac-sharaxaad ama noocyo, marka liistadu ka muuqato maareeyaha xirmadayada. waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Ku rakib barnaamijyada
Waxaan doorannaa oo calaamadeynnaa arjiga si loo rakibo
Waxaad ku ogaan kartaa sawirka inuu a + calaamadi ka muuqato buluug, tilmaantan waxay muujineysaa in xirmada su'aasha ah la qorsheeyay in la rakibo, maxaa loo qorsheeyay? Waa hagaag tani waa sababta oo ah waxaan dooran karnaa baakado badan oo raadin badan ah oo aan rakibi karno hawlgallo, si fudud loo dhigo, waxaan rakibi karnaa wax kabadan hal barnaamij markiiba;).
Markaan dhammeyno xulashada barnaamijyada aan rabno inaan rakibno, riix batoonka aplicar.
Haddii xirmooyinka (yada) ama arjiga (yada) aan rakibeyno ay u baahan yihiin ku-tiirsanaan dheeri ah, waxaan arki doonnaa sawir sida kan soo socda halka uu nooga sheegayo tan:
Waan riixnaa Sii wad Si aad ugu sii wadato rakibida, tallaabada xigta waxaa naloo weydiin doonaa inaan galno lambarkayaga sirta ah, marka tan la dhammeeyo, hawsha rakibida waa la fulin doonaa
Xulo oo calaamadee barnaamijka.
Sida laga yaabo inaad ogaato, astaan ​​ayaa u muuqata qaab qashin qashin ah oo si sax ah u tilmaamaya in xirmadan loo qorsheeyay in laga saaro. Si aan u sii wadno, waxaan riixnaa aplicar hawsha furitaankuna way bilaabmi doontaa.
Qoraal ahaan, qaarkiin ayaa isweydiin kara, muxuu badhanku u yahay? Nadiifi ka yimid maareeyaha daaqada? Shaqada badhankani waa in la baabi'iyo wixii isbeddel ah ee loo qorsheeyey maareeyahayaga dalabka, taas oo ah, in la baabi'iyo dhammaan isbeddelada aan calaamadeynay ama tilmaamnay ka hor inta aan la adeegsan, waxay u dhigantaa xiritaanka faylka iyada oo aan la badbaadin isbeddelada;) .
Fudud ku filan, sax? 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo Fedora: Ku rakib, Raadi oo ka saar codsiyada qaab muuqaal ah (GPK-Application iyo Apper)
Marar dhif ah ayaan u isticmaalaa arjiga si aan ugu rakibo sawirada, waxay umuuqataa mid gaabis ah oo aan caqli gal aheyn, mararka qaar ma ogid waxaad sameyneyso, wax horumar ah ama wax jira ma jiraan.
Waxaan doorbidayaa qunsulka in aan isticmaalo yum
Waxaan horeyba u nahay 2, maahan inaan dhaho dhowr XD. yum lama gudbi karo, laakiin waqti ka waqti waa inaad ka fikirtaa kuwa cusub;).
Waad salaaman tihiin bro :).
Haa! runti ra'yigaygu ma ahayn inaan ahay qof adeegsanaya konsole, laakiin waa inay hagaajiyaan GUI 🙂
Fikrad kasta oo sababta ah markii aan rakibayo Sanduuqa Virtual-ka ay i siineyso qalad ah in uusan ka heli karin kernel-ka Linux, ama codsigan aad muujisay waan ku rakibi karaa aniga oo aan ka bixin bogga oraahda? Taasi ma waxaan u baahanahay VM sababtaas darteedna waxay ahayd inaan dib ugu noqdo ubuntu: p
Khaladka aad qeexday wuxuu udhacay sidan soo socota:
maanta maanta waxaan isku dayaa mahadsanid macluumaadka
sabayon isku dhibaato ayaan ku qabay, xalkaas miyeey sidoo kale iigu adeegi laheyd distoorkaas mise waxaa kaliya loogu tala galay fedora?
Waxay la mid noqon doontaa Sabayon;).
Waxa igu dhibay fedora 16 waxay ahayd kadib markaan rakibo 'glchess' waxaan uqeexay inuu kahortago kombiyuutarka waqtiga la ciyaarayana qaybna lama dhaqaaqin ¬ ¬ rajo ahaan iyo fedora 17 waa la xaliyay.
Yumex waa la waayey, runtu waxay tahay inay si fiican u socoto.
Waxaan ku biirayaa yumex, muddo dheer ayaan istcimaalaa oo sifiican ayey iigu habboon tahay, in kasta oo ay waajib igu tahay in aan qirto in kabaha markii ay wax badan isku xoqaan aan ku dhammeeyo qalabka 'yum'
Ma garanayo waxa dhaca, laakiin waxaan siiyaa "Apply", waxay soo baxdaa "Sugitaanka safka" - "Ka soo degsashada macluumaadka bakhaarka" - "Xallinta ku tiirsanaanta", baarka horumarka ayaa bilaabmaya ka dibna waa la saaraa oo waxba lama rakibin. Ma jiraa qof og waxa dhacaya? Waxaan raacayaa talaabooyinka ku yaal boggan: http://www.howtoforge.com/the-perfect-desktop-fedora-17-p3
Waa maxay xirmada saxda ah ee aad isku dayeyso inaad rakibato? Waxaan u maleynayaa inay qasab tahay inay sababtu tahay qalad aad ku leedahay meelaha wax lagu keydiyo, hubi inaad nidaamka si fiican u raacday;).
Xaqiiqdii waxaan isku dayayaa inaan ku rakibo dhammaantood isla waqtigaas, hehe, ma aqaano inay sabab u tahay waxa ay kor ku sheegaan, oo ah mid aad u gaabis ah, waana inaan isku dayaa inaan ku rakibo mid mid, ama kooxo yar-yar
runti waxaa jira baakado sida banshee iyo azureus oo ii oggolaan maayo inaan rakibo, kuwaas oo aan isku dayay, kuwaa iima oggolaan doonaan, waxba kama sheegayo, kaliya ma rakibayso
Haye… miyaanad sii dhejin doonin wax ku saabsan Fedora?
Perseus waa midka adeegsada Fedora, dhowr biloodna wuxuu la kulmay dhibaatooyin qaar oo u diidaya inuu u yimaado halkan inuu daabaco.
Waxaan ku isticmaalayaa Fedora 19 Isbaanish.
Waxaan rakibay pgAdmin3 anigoo adeegsanaya "yum install pgadmin3", laakiin waxaan ku helay interface ka oo ah luqad aanan halkan ku aqoon.
Jawaab Francisco Villavicencio
Waxaan rakibay pgAdmin3 anigoo adeegsanaya "yum install pgadmin3", laakiin isdhexgalka wuxuu kujiray luuqad aanan garanayn sida ay u egtahay (badh Jarmal, badh Faransiis, badh Boortaqiis ...) markaa waxaan doonayay inaan barnaamijka ka tirtiro anigoo adeegsanaya qpk-application. Ka dib markaan bilaabay arjiga pgk…, wuxuu ii sheegayaa inaan ku qoro magaca. Waxaan qortay "pgadimin3". Kumbuyuutarka ayaa hurday weligiis mana isiin wax natiijo ah.
Waan soo dagsaday oo aan soo raray pgk ... waxaan isku dayay "postgresql" oo aan sidoo kale rakibay, kumbuyuutarkiina wuu iska seexday isagoon wax jawaab ah i siin.
Ma aqaan waxa ku dhacaya xirmada pgk-application.
Cashar aad ufiican 😉
Isbarbardhig: adeegsiga xusuusta ee aagagga ugu muhiimsan desktop-ka
Waxa la sameeyo ka dib rakibidda Fedora 17 Beefy Miracle